सेनामा नयाँ चलखेल
२0७४ श्रावण ९ सोमबार | ०६:१४:१५ Toggle navigation home
प्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुगायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेसेनामा नयाँ चलखेल सेनामा नयाँ चलखेल
काठमाडौं । नेपाली सेनामा भावी प्रधानसेनापतिको चलखेल सुरु भएको छ । उपरथी प्रेमप्रकाश थापाले सफाई पाएसँगै भावी नेतृत्वका लागि सेनामा नयाँ समीकरण बनेको हो ।
थापा पुनर्बहाली भएको खण्डमा उनको प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावना छ । तर, सफाइ पाए पनि उनी पुनर्बहाली भएका छैनन् । जंगीअड्डाले असहयोग गरेपछि उनी पुनर्बहालीका लागि राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । थापाको पनुर्बहाली नभए सहायक रथी प्रभुराम शर्मा सेनापति हुनेछन् । त्यसकारण यतिबेला थापा र शर्माबीच भावी प्रधानसेनापतीका लागि संघर्ष सुरु भएको छ ।
थापालाई कीर्ते काण्डमा २०७० कात्तिक २७ गते सेनाले सेवाबाट हटाएको थियो । गत जेठमा उनले सफाइ पाएका थिए । तर सफाइ पाएको तीन महिनासम्म पनि उनको पुनर्बहाली प्रक्रिया सुरु भएको छैन । उनको अवधि अझै करिब ८ महिना बाँकी छ । दुई बर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान भएकाले उनी प्रधानसेनापति बन्ने सम्भवना हुन्छ । हालका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीपछि पूर्णचन्द्र थापा सेनापति हुने लगभग तय भइससकेको छ । २ बर्ष म्याद थपिएको अवस्थामा त्यसपछि थापा सेनापतिका दाबेदार हुनेछन् । उनी प्रधानसेनापति भएमा प्रभुराम शर्माको बाटो बन्द हुनेछ ।
छत्रमानसिंह गुरुङको कार्यकालमा थापा सैनिक सचिव थिए । सहायक रथी हेम खत्रीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुँदा समेत उनलाई वार कोर्स गर्न पठाइएको थियो । थापाले नै खत्रीलाई सिफारिस गरेका थिए । छानबिनमा खत्रीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको खुलेपछि दुवैजनालाई बर्खास्त गरिएको थियो । गत जेठमा बिशेष सैनिक अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो । हालका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीकै बोर्डले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकारण प्रधानसेनापति क्षेत्री थापासँग नकारात्मक छन् । पुनर्बहालीका लागि थापाले माओवादी केन्द्रका जनजाति नेताहरुमार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ अन्य समाचार
एनसेलको लूटमाथि टावर फोर्ने देखि सेवा बहिष्कार गर्ने कता हराए ?कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?देउवाको हातमा केसीको जीवन !गायक तिवारी भन्छन्,'बाचुन्जेल सांगीतिक छेत्रमा हिडिरहनेछु'संगीतमा रमाउदैँ हेमन्त !प्राण रहुन्जेल गीत संगीतमा जम्ने प्रणगृहमन्त्री ज्यू, कहिले एक्सन चाल्ने ?'उपसभापति भारतले मानेन भन्न लाज लाग्दैन्' ? ,सभापति देउवाज्यू !प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन-सर्जक रत्न बुढाप्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुएनसेल प्रकरण, करोड खुवाएर अर्ब लुट्न चलखेलराजश्वका डिजी चुडामणि शर्माको उत्पात कहिले सम्म हो ?गायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेएनसेल प्रकरणमा : ओली, देउवा परिवार र प्रचण्ड परिवारलाई पनि प्रलोभन देखाउँदै आचार्य दाजुभाइप्रशासन र बलियो नियामक नहुँदा एनसेलको राजएनसेल प्रकरण: राजस्व विभागले ठोस जवाफ नदिए पछि सीआईपी सम्मान रोकियोगीत बिमोचनसगैँ यसकारण दङ्ग हट मोडल !एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि कर विवाद झन बल्झदैगल्ती लुकाउन बाबुछोरालाई खोरमा !सेनामा नयाँ चलखेलआईजीपीको लागि अहिले देखि यस्तो दौड !प्रहरीमा सरुवाको दौड‘‘हलो हट्काएर गोरु चुट्ने काम एमालेले ... - काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडानेबिसघको नसकिँदै तरुणका नेता यस्तो रन्कोमाप्रभाबशाली नेता खड्का स्वदेश फिर्ता , विमानस्थलमा भव्य स्वागत featured video